ကျေးဇူးတင်စရာ မိတ်ဆွေများနဲ့ တစ်နေ့တာ ဘဝအမောများ - Calm Hill
ကျေးဇူးတင်စရာ မိတ်ဆွေများနဲ့ တစ်နေ့တာ ဘဝအမောများ
Sun 09 August 2009
အလုပ်ကလည်း လခက ကံဆိုးချင်တော့ နောက်ကျပြီး အခုထက်ထိ မရသေး အဲဒါကိုမှန်းမထားတော့ အမေကဟိုတစ်လောက ပိုက်ဆံလိုသေးလားဆိုတော့ အလုပ်လုပ်နေတာပဲ မလိုဘူးပြောလိုက်တယ် ကျောင်းဖွင့်တော့ ကျန်းမာရေးအာမခံတွေ မူပိုင်ခွင့်ဖိုးတွေ အတွက်ရှိတဲ့ လက်ကျန်နဲ့ ကြိုပြီးပေးလိုက်တာ ပြဿနာတက်တာပဲ အခုတော့စားစရာက ဟိုဘက်ဘဏ်မှာ ၁ဝ သည်ဘက်ဘဏ်မှာ ၁၁ ကျပ်ကျန်တယ် အဲဒါကလည်း ထုတ်မရလို့ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း ၁ဝ အွန်လိုင်းကနေ ဟိုဘက်သည်ဘက် လှဲလိုက်မှ ၂ဝ ပြည့်လို့ ATM မှာထုတ်လို့ရသွားတယ် အဲဒါလည်း စားစရာစျေးဝယ်လိုက်တာ ကုန်ပါရောလား။
ကိုဒီဘီအိမ်က ဆွမ်းကွေးကိုသွားဖို့ MRT ဖိုးတောင်အသွားပဲရှိတယ် အပြန်ဖိုးမရှိလို့ မလာတော့ဘူးလုပ်နေတာ ကိုသာသာက ဟာဗျာ ကျွန်တော် ပါနေတာ ဒါအတွက်နဲ့တော့ မလာပဲမနေပါနဲ့ဆိုလို့ သူ့ကျေးဇူးနဲ့ ကိုဒီဘီအိမ်က ဆွမ်းကွေးကိုသွားစားရတယ် စားရတဲ့ထမင်းထဲမှာ ငတ်နေတဲ့အချိန်လို့ ပြောရမယ့်အချိန်မှာ စားရတဲ့အတွက် အင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုသာသာကိုတော့ ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။ ကိုသာသာရဲ့ စရိတ်နဲ့ ထမင်းစားလာရတယ်လို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။
ဆွမ်းကွေးမှာလည်း မမဆင်က ရေဘူးလာသိမ်းရင်း ရယ်ပြတယ်တဲ့ မြင်ဘူးလေ နှစ်ရက်လောက် မအိပ်ရသေးတော့ လူကလည်း ဝါးတားတား ဖြစ်နေပြီး ငိုက်ချင်နေတာပါ အဲဒါကိုသူလည်းမသိဘူးလေ ဒါနဲ့ လူမှု့ရေးနားမလည်ဘူး အပြောခံလိုက်ရသေးတယ်။ ကိုဒီဘီဆီလာတဲ့ ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကတော့ လူပျိုကြီးဆိုပြီး မိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ ကြောက်များသွားကြလားမသိဘူး မကြာပါဘူး ပြန်ပြေးကြပါရောလား။ ဘာပဲပြောပြော ရခိုင်ဟင်းတွေနဲ့ အပြီစားခဲ့ရတာပဲ သို့ပေမယ့် အိပ်ရေးတွေပျက်နေလို့ စားလို့မဝင်ဘူး စံချိန်တွေလည်း ကျသွားပါရောလား။
ပြန်မယ်လုပ်တော့ အိုက်ကီဒိုသင်တန်းက ဆရာဆီက SMS ဝင်လာပြန်ရော။ ကိုယ်ကလည်း ပိုက်ဆံကိစ္စနဲ့ လုံးပန်းနေရလို့ မအားတာနဲ့ မသွားနိုင်တာကကြာပြီလေ အလုပ်လုပ်နေရလို့ မအားဘူးလို့ ပြောထားတော့ သူကလည်း အလုပ်ပိတ်ရက်ဆိုပြီး မှတ်မှတ် ရရခေါ်ရှာတယ် If U missed Aikido training, good news Bukit Batok East CC is open 2morrow 10 Aug. Aikido training is as usual time. Do come n join us. Sensei လို့ဝင်လာပါရော။ မနက်ဖြန်တော့ သူ့ကိုအားနာလို့ရယ် ပြန်လည်းသွားသင့် နေတာရယ်ကြောင့် သွားရဦးမယ်။
ဒီညလည်း အိပ်တော့အိပ်ချင်တယ် ရေးထားတဲ့ Paper လေးကိုလည်း ပိုကောင်းအောင် ပြင်ချင်နေတော့ စောစောအိပ်ဖြစ်မယ် မထင်သေးပါဘူးလေ National Day ဆိုပြီး လူတိုင်းအားနေ ပျော်နေကြတဲ့အချိန် ကိုယ့်မှာပဲ စာတမ်းအတွက် နောက်ဆံတင်းနေတာရယ် မနက်ဖြန်ပြီးမှ စားစရာမကျန်ရင်တော့ ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ စဥ်းစားပြီးရင်မောနေရတယ် လခစားလုပ်ပြီး လခမျော်ရတဲ့ အလုပ်တယ်တယ်ပြီး မကိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ ကိုသာသာပြောတဲ့စကား တယ်မှန်ပါလားနော်။